Buuga Qorshaha Ganacsiga Ee Shirkadda (German Medical Center) Oo Daafaha Caalamka Wadagaarey Iyo Saamiga Shirkadda Oo Aad Loogatay. – Codka Qaranka Tanadland
Codka Umadda Karaamaysan Ee QarankaTanadland.Weriye, Saxardiid.
Dabayaaqadii sanadihii todobaatameeyadii laga soo bilaabo (1976) ilamaa iyo 1982, Sanadahaasi ganacsatada reer Tanadland ee ka beecmushtara daawooyinka waxay u ahayd waqti dahabi ah. Anigu xog’ogaal baan u ahaa dhaq-dhaqaaqooda ganacsi, Waxaana ogaadey mudadii aan joogey xarunta wakaaladda daawada soomaaliyeed ee (Ispima), Qaasatan qaybta daawo bixinta. Mahadi haka gaarto kacaankii barakaysnaa ee talada dalka hayey. Wakaaladda daawada soomaaliyeed ee (Ispima) waxay ahayd hay’ad wadanka ka haqabtirtay xaga daawada. Qof kasta oo soomaali ah oo u baahan in uu wakaaladda ka iibsado daawo xadiga ay doonto ha le’ekaatee waa u iibsan jirey. Baahi daawo yaraanina wadanka kama aysan jirin haba yaraatee.
Qofka ganacsadaha ah ee daawooyinka ka ganacsada wuxuu tegijirey xarunta kaydka daawada ee xamar, Markaas ayuu codsanjirey daawooyinka uu rabo inuu iibsado in loo qiimeeyo. Dabeedna marka loo qiimeeyana, Warqad ay ku qoranyihiin liiska daawada uu qofku rabo iyo qiimahooda ayaa lasiinjirey. Bangiga ganacsiga oo xarunta wakaaladda (Ispima) masaafo aad u yar oo 250m aan ka badnayn u jirta, Ayuu qofku markaas lacagta ku soo shubijirey. Marka qofka ganacsadaha ihi uu keeno qaybta xarunta kaydka daawada, Warqadda boonada ah ee cadaynaysa in uu lacagtii sooshubay. Ayuu qofkaasi uu qaadanjirey daawada uu gatay. Waxaana aalaa dhicijirtey in ganacsatada waaweyn ee xadiga daawada badan iibsada. In ay bangiga ganacsiga iyo xarunta kaydka daawada yimaadaan subaxa hore, Waqtiyada aysan mashquulka ahayn. Markaasna ay mudo 1 saac ka yar 3 ilaa 4 isjiid oo daawo saarantahay ay la dhaqaaqaan.
Berigaas isaga ah, Ganacsatada reer Tanadland aad bay u badnayd marka loo eego ganacsatada soomaaliyeed oo daawooyinka ka beecmushtara. Tirada ganacsatada reer Tanadland oo daawooyinka ka mushtara qiyaas ahaan waxay ahayd 70 ilaa 75 nin. Oo marka ay ugu yaraato 68 kamid ah daawooyinka ay hab jimlo iyo tafaariikh ah uga ganacsadaan. Waxaa taas ka sii muhiimsanaa, Ganacsatadu waxay ahaayeen ganacsato iskuxiran oo iskaashato hoosaadyo leh. Iskaashatada ugu balaaran ee ay xooluhu isugu jiraan waxaa madax u ahaa (Dr. Ugaas Axmed Ugaas Maxamed), Oo hada ah isimka guud ee isimada iyo salaadiinta reer Tanadland. Berigaasna hawsha dowliga ah ee isbitaalka iyo ganacsiga iskuwadey.
Intaas waxaa dheer, Ganacsatada daawooyinka ka ganacsada ee reer Tanadland berigaas maadaama ay ahaayeen quwad midaysan. Aas-aaskii (Iskaashatada Daawooyinka Iyo Farmashiyoleyda Soomaaliyeed) taladii lagu abuuray, Waxaa iskalahaa ganacsatada reer Tanadland. Gudoomiyihii iskaashatadu ay yeelatana kama uusan horeyn kamana danbeyn (Col.Ciiro Xirsi Cali “Siigo”). (Col.Ciiro) berigaas xilka uu ciidanka nabadsugida ka hayey ka sokow, Wuxuu kamid ahaa ganacsatada daawooyinka ka ganacsada kuwooda ugu waaweyn. Ganacsatada reer tanadland waxay fahmeen iskuna wargeliyeen, Sida ugu sahlan oo berigaas lacag lagu samaynkaro inay tahay ka mushteridda daawooyinka.
Ganacsatada reer Tanadland ee daawooyinka ka ganacsada guud ahaan, Waxay lahaayeen hab ganacsi oo ka duwan sida ganacsatada kale ee soomaalidu ay u ganacsadaan. Ganacsatada reer Tanadland shaqsiyaad dhif ah maahane waxay lahaayeen baqaaro iyo farmashiyeyaal. Daawada ay ka ganacsadaana inteeda badan waxay u dhoofinjireen gobalada iyo degmooyinka soomaaliya. Qayb muhiim ahna waxay geyn jireen degaanka soomaalida ee Ethopia. Ganacsatadaas oo qiyaas ahaan tiradoodu u dhexaysey 70 ilaa 75 ganacsade, Waxay xaruntoodu ahayd magaalada Xamar. waxayna xiriiro iyo wakiilo ay ku lahaayeen magaalooyin badan oo soomaaliya ku yaala.
Shirkadda (German Medical Center) Hadafkeedu Muxuuyahay?, Maxayse Ka Faa’iidayaan Macaashdoonka Reer Tanadland Ku Biiriddeeda?.
Soomaaliya sidaynu ogsoonahay shirkaddo macno leh oo isbitaalo dalka ka dhisay malaha, Isbitaalo si kastaba halagu abuuree dadka baahidooda caafimaad ku filan iyaguna ma’ay jiraan. Wadamada deriska ah oo ay soomaalidu ku badantahay sida (Kenya) iyo (Tanzania), Waa ay jirtaa in ay soomaaliya dhaamaan. Balse xaqiiqdii waynu wada ogsoonahay in soomaalida wadamadaas arimo caafimaad u taga, In intooda badan marka shilimada lagafurto, Iyaga oo aanan waxba looqaban ay dalkii dib ugu noqdaan. Soomaaliduna waa ay ka jaahilbaxday oo hada waaba ay yaryihiin dad arimo caafimaad u aada. Iyadoo ay saas tahay ayaa hadana wadamada bariga afrika ay isdhaamaan. Waxaana ugu roon dalka Ethopia gaar ahaan magaalooyinka (Adis-ababa) iyo (Diridhaba).
Balse wadamada bariga afrika oo ay soomaalidu ku badantahay hantida faraha badanna ay geliyeen sida (Kenya) iyo (Tanzania), Isbitaalo waxtar ah ma’ay laha. Haday tahay kuwa dowladda iyo haday ahaato isbitaalada gaarka loo leeyahayba sida kuwa (Aga Khan Hospitals). Oo ah isbitaalada qura ee gaarka loo leeyahay oo ku yaala dhamaan wadamada bariga afrika ee afka sawaaxiliga ku hadla, Sida wadamada (Kenya), (Tanzania) iyo (Uganda). Waxaa intaas weheliya, Wadamada bariga afrika ku yaala sida soomaaliya ma’ay laha habdhaqan ganacsi oo farmashiyeyaal iyo mid daawo toona. Taas oo u macnaheedu yahay marka laguuqoro daawo tayo leh, Daawadii heli’ad meysid. Sababta oo ay tahay farmashiyeyaashu waa wax naadir ah, Hadaad heshana waa nin Hindi ah oo indho qarsho ah leh oo biciriirsanaya iyo xaaskiisa, ama isaga iyo gabadhiisa.
Mudo haatan laga joogo 4 bilood ayuu aniga buuga qorshaha ganacsiga ee shirkadda (German Medical Center) isoogaarey. Buuguna waa buug aad loo faafiyey oo dadka reer tanadland sidaan filahayo wada gaarey. Sida buuga qorshaha ganacsiga ee (Shirkadda (German Medical Center) ku xusan, Shirkaddu waxay dhul ka iibsatey xaafadaha magaalooyinka (Nairobi) iyo (Darasalaam) ugu qaalisan, Oo ay ku noolyihiin dabaqaddaha dhexe iyo dadka hantiileyaasha ah. Shirkadduna waxay ka dhisaysaa isbitaalo iyo farmashiyeyaal caalami ah, Oo lamid ah isbitaalada gaarka loo leeyahay ee ku yaala wadanka Jarmalka.
Maamulka shirkadda ninka madaxda ka ah waa Jarmal waxaana la yiraahdaa (Dr. Michael Hulsmann). Dhaqaatiirta isbitaalaka ka shaqaynaya intooda badanina waa jarmal. Dhaqaatiirta tirada yar oo soomaalida ah ee isbitaalka ka shaqayn doonta. Waxaa xulanaya maamulka shirkadda oo hawshaas u madaxbanaan. Waxaana shardi ah in dhaqaatiirta ka hawlgelaya isbitaalada shirkadda (German Medical Center), Inay kuligood noqdaan dad wax ku soo bartay dalka Jarmalka. Isla markaasna qibrad u leh xirfadda ay ku takhasuseen oo dalka jarmalka uga soo shaqeeyey. Farac kasta oo kamid ah shirkadda (German Medical Center) waxay yeelan doontaa waxkasta oo u leeyahay isbitaal guud oo dalka Jarmalka ku yaala. Waxaana intaas u dheer shirkaddu waxay yeelandoontaa farmashiyeyaal aan laga waayin daawooyinka loo baahanyahya oo dhan.
Qaasatan daawooyinka shirkadda (Bayer Pharmaceutical Company “Bayer AG”) oo ay shirkadda (German Medical Center) heshiis la gashay, Ahna shirkad soo saarta laguna yaqaan daawooyinka ugu tayada iyo waxtarka wanaagsan caalamka. Shirkaddaha isbitaalada leh oo ku ganacsada lana baxa magaca (German Medical Center), Waxaa ugu caansan kuwa ku yaala wadamada khaliijka. Siiba kuwa ku yaala wadanka Isutaga Imaraadka Carabta (UAE) oo ka diiwaan gashan. Balse shirkadda (German Medical Center) ee bariga africa waatii ugu horeysey oo nooceeda ah.
Isbitaalada shirkadda (German Medical Center) waxaa laga kala dhisayaa xaafaddaha safaaradaha iyo dadka hantiileyaasha lihi ay deganyihiin, Sida xaafadda (Kileleshwa) oo ku taala magaalada (Nairobi). Iyo xaafadda (Upanga) oo ku taala xeebta magaalada (Darasalaam). Waxaana xarunta shirkaddu ay noqon doontaa xafiiska magaalada Nairobi ku yaala ee u adareeskiisu hoos ku yaal.
Shirkadda (German Medical Center) ayaa waxaa abuuray iskaashato yar oo ka kooban 13 qofood oo reer Tanadland ah. Dhulka ay magaalada Nairobi ka gateen waa laba qaybood, Qaybi waa dhul dhismeyaal duug ahi ay ku yaalaan oo ku yaala xaafadda (Kileleshwa) ee magaalada Nairobi. Qaybina waa dhul banaan oo u dhexeeya xaafadda (Eastleigh) iyo bartamaha magaalada Nairobi.
Ujeedada kaliya ee aan qormadaan uga danleeyahay waxay tahay, in hadiiba ay jiraan dad reer Tanadland ah oo aan ka warqabin, ama uusan weli garin buuga qorshaha ganacsigla ee shirkadda (German Medical Center), in aan ku wargeliyo xogta fursadda aadka u qiimaha badan ee taariikhiga ah. taas oo fursad u siinaysa qofkasta oo reer tanadland awoodana in uu xubin saamiley ka noqdo shirkadda (German Medical Center). in uu qofkaasi helo il dhaqaale oo waxsoosaar badan iyo lahaansho koboc maaliyadeed, oo hurumarka qoyskiisa iyo kan umadda Tanadland waxtar balaaran u yeelandoona. Buuga qorshaha ganacsigla ee shirkadda (German Medical Center) maaha buugii ugu horeeyey oo noociisa ah ee aan arko. Xayn buug ah oo qorshe shirkaddo in lagu aas-aaso loogu talogalay baan soo arkay, shirkaddihii oo la aas-aasay saamigoodiina dadka reer tanadland ay si aan la malaysan karin u gateena waa’an u soo joogey.
Shirkadda (German Medical Center) ayaa waxaa abuuray iskaashato yar oo ka kooban 13 qofood oo reer Tanadland ah. Weriye: Saxardiid
Shacabka horusocodka ah ee reer Tanadland, ee xilkaska ah, oo indheer garadka ah, ee uu rabigay nagu galaday ka sokow. waxaa ah wax illaah looga mahadsho, in isimada iyo salaadiinta reer Tanadland ay kuligood yihiin dad ganacsato ah oo waxsoosaar badan. intaasna waxaa weheliya doorka muhiimka ah ee ay ka qaataan fulinta qorshaha qaranka iyo awaamiirta ururka midnimada Tanadland. isimada iyo salaadiinta reer Tanadland marka qayb kamid ah ganacsatada tanadland, ay sidatan oo kale ugu qalabqaataan unkidda iskaashato ganacsi oo baaxad leh. Hawshoodu waa ay dhaafsiisantahay ducada oo ay u tuumiyaan. ee waxa ay kaalin kudayasho leh oo hormuudnimo ah ay ka qaataan fulinta qorsheyaasha umadda.
Gobanimadu maaha umad calal babinaysa oo aan isku filayn sacabadana qayrkeed u hoorsanaysa, Gobanimada iyo madaxbanaanidu waa marka umadi xaga fikirka ay ka fayowdahay oo cirka iyo cidkale toona aysan wax ka dhawrayn. ilaa wax ay iyagu tabcadaan oo ay muruqooda iyo maskaxdooda kulasoobaxaan mooyaane. Taas waxaan ula jeedaa hawl iyo hantiwadaagu waa dhabaha gobta ee ay umadaha xorta ahi qaadaan. Mustaqbal ayaatiin wanaagsan iyo horumarna ay ku gaaraan. Macquulna maaha in umad aan sanuuddeeda maaliyadeed meel isugu geynkarin, Oo qorshayn guud iyo wax wadaqabsi aanan lahayn, Umad gob ah oo himilooyinkeeda gaarta ma’ay ahaankarto.
Shirkadda (German Medical Center) sida buugeeda qorshaha ganacsiga ku xusan, Miisaaniyad ayey u qoondaysay hawlaha iidhehda iyo ogeysiiska. Waxaa kaloo ay shirkaddu leedahay shabakad warbaahineed oo khadka internetka ah (http://germanmedicalcenter.net/). Waxaana la hawl gelindoonaa mudo aan fogeyn marka shirkaddu hawlaheeda ganacsi ay bilowdo. Halkaas oo macaamiisha shirkadda (German Medical Center) ay ka helidoonaan wixii macluumaad ah oo ay u baahdaan. Waxaa kaloo shirkadda (German Medical Center) qorshaha ugu jira, Adeegsiga qaybaha kaladuwan ee qalabka warbaahinta.
Tel.: + 254 20 23 22 21 2
P.O. Box 76208 – 00508
Managing Director. Dr. Michael Hulsmann
Dr. M. Hulsmann m.hulsmann@GermanMedicalCenter.net
Shirkaddaha ay leeyihiin ganacsatada reer Tanadland intooda badan, Waxaad moodaa in aysan dareensanayn muhiimadda ay leeyihiin shabakaddaha warbaahinta ee khadka internetka. Qaasatan shabakaddaha warbaahinta ee shirkaddaha u gaarka ah oo sumaddooda wata. Kuwooda yar-yar, kuwa meeldhexaadka ah iyo kuwooda waaweynina waa ay wadaagaan dhaliishaas. Waxaanse rajeynayaa in ay wax iskabedeli doonaan mustaqbalka. Tusaale fiicanna waxaan u soo qaadanayaa intooda fahansan muhiimadda shabakaddaha warbaahinta internedk, Iyo faa’iidada ay u leeyihiin ganacsiga. Shirkad yara oo la yiraahdo (Soldad Food Distributor. Co). Kuna taala magaalada (Kent) oo kamid ah gobolka (Washington), Oo magaalooyin dhawr ah oo ku yaala dadka reer Tanadland ay aad ugu badanyihihiin. Sida magaalada (Seattle). uuna leeyahay nin reer Tanadland ah.
Soldad Food Distributor.Co
20220 87th Ave South BLDG.I
Tell:(253) 872-4720 Cell: (206) 841-4937
Fax: (253) 872-4730
Shirkaddaha reer Tanadland ee meeldhexaadka ah oo bar internet aan lahayna waxaan tusaale u soo qaadanayaa, Shirkadda faracyada badan ee (AL SADAD JEWELLERY Chain Store). ahna shirkadda dukaamada ugu badan oo ay soomaaliyi leedahay ku leh suuqa dahabka ee aduunka ugu weyn ee magaalada (Dubai), Suuqaas oo ku yaala xarunta caanka ah ee loo yaqaan (Al Ras Centre). Shirkaddaas oo ay leedahay gabar kamid ah gabdhaha maalqabeenada ah ee reer Tanadland.
AL SADAD JEWELLERY L.L.C
Head Office. Location13, Al Ras Centre
Deira, Dubai; P.O.Box23227; Tel04-2252040; Fax04-2735441